Ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na ndị na - ebubata ya - Productslọ ọrụ Ngwaahịa China
FIBC Fabric tingcha Machine
FIBC echebe Machinecha Machine
Igwe ihicha FIBC
Bottle Shape liner akara igwe
Akpa Liner akpa
Igwe obibi akwụkwọ
Eyi kpara akpa Ndinam igwe
Automatic Jumbo akpa Cleani ...
Jumbo akpa FIBC Fabric Cutti ...
Jumbo akpa echebe webbing FIBC ...
FIBC Pee Film Auto Bottle Sh ...
Ultrasonic ịcha akara igwe eji na okirikiri ekwe
Mbelata nke ultrasonic anaghị achọ nkọ agụba, achọghịkwa nnukwu nrụgide, enweghị mmebi na mmebi ma ọlị. N'otu oge ahụ, n'ihi ultrasonic vibration, esemokwu dị obere, ọ dịghị mfe ịrapara na agụba. Ihe di ka viscous na ihe na-agbanwe.
Na ultrasonic generator na-emepụta n'ibu ume nke ọma jijiji karịa 20000 ugboro-400000 ugboro kwa abụọ ka ọnwụ agụba, ọ na-ebipụ ihe site na mpaghara kpo oku gbazee, iji nweta ebumnuche nke ịcha ihe.
Jumbo akpa FIBC Fabric Cutting Machine CSJ-2200
Igwe akụrụngwa pụrụ iche na-ejikọ ọrụ dị iche iche na akpa akpa jumbo dị ka: Auto. Jumbo ákwà mpịakọta nri, Edge usoro akara (EPC), Ogologo-agụta, Punching unit maka "O" oghere, Punching unit maka "X" oghere, Circle na-akọwa, Linear-mma ọnwụ, Jumbo-ákwà nri.
Jumbo akpa Fibc akpa Full-Automatic Okpomọkụ tingcha Machine CSJ-1350
Anyị CSJ-1350, CSJ-2200 na CSJ-2400 bụ igwe ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ma rụọ ọrụ nke ọma iji mepụta ogwe FIBC (nnukwu nnukwu akpa, akpa Jumbo) nke ogwe osisi tupu egbutu ya, nke enwere ike ịhazi maka ịkọ nkọ profaịlụ dịka ndị ahịa chọrọ.
Akpaaka Jumbo akpa nhicha igwe ikuku ikuku FIBC Cleaner ESP-B
Igwe ahụ na-ezo aka na igwe nhicha dị n'ime, na-ezo aka na akpa akpa akpa igwe. Na usoro ịcha na ịkwa akwa akpa, isi ákwà ga-emepụta ọkụ eletrik.
Jumbo akpa echebe webbing FIBC nnukwu akpa akaghị Cutting Machine FIBC-6/8
Ejiri FIBC nnukwu akpa akụrụngwa akụrụngwa ya na akpaka akpaka, ntanye akụrụngwa, na mbelata akpaka ma jiri igwe eji arụ ọrụ iji chịkwaa ogologo ọnwụ nke pụtara ìhè maka nnukwu ọsọ ya, obere ọkụ na nnukwu akpaaka.
Pee naịlọn akpa Heating akara na tingcha Machine
Igwe a kachasị maka akpa na akpa nylon maka akara ọkụ na ịkụcha ọkụ.Ọ nwere uru nke nri nri na-akpaghị aka, ịpị ọkụ na-akpaghị aka, ịkpụ aka na akpaaka akpaaka na-anata.
Jumbo akpa ọnụ akwa Rolling igwe
A na-ejikarị igwe eme ihe iji belata ọnụ akpa jumbo. Ọ dị mfe iji. Ọ nwere ike ikuku multi oyi akwa otu oge ọnwụ, ọnwụ ọsọ bụ ngwa ngwa na elu arụmọrụ. Dịka ngwaahịa dị iche iche nke ndị ahịa, anyị na-akwado ọrụ ahaziri iche nke igwe.
FIBC Jumbo akpa nhicha igwe ESP-A
Igwe nhicha akpa anyị na-enye ngwọta nhicha dị mma maka fibc (akpa iumbo) eji maka nri na ngwa ọgwụ. n'iji ikuku edozichara, usoro nhicha ọkụ nke igwe a na-eme ka mwepụ nke mmetọ niile rụrụ arụ n'oge ịcha na ịkwa akwa
FIBC Pee Film Auto Bottle Shaị Liner akara tingcha Machine
Igwe a nwere ọrụ nke ịkpụ ụgbụ, belata ala, nsị nsị, ịkpụ ụrọ na karama ọnụ. Ọ na - edozi nsogbu nke imepụta ntuziaka nke akpa fibc jumbo. Igwe ahụ ziri ezi, arụmọrụ nke otu igwe nwere ike dochie ọrụ ọrụ nke ndị ọrụ 10 opekata mpe.
p kpara akpa obibi akwụkwọ igwe
Eyi kpara akpa Printing Machine na-akpan mere maka ibipụta okwu na ụghalaahịa na kpara akpa na laminated akpa, na-abụghị kpara akpa, jute akpa na akwụkwọ, nakwa dị ka katọn igbe. Ọ nwere ike ịmechaa mbipụta multicolor n'otu oge.
Eyi kpara akpa tingcha na Sekwa ​​Akwa Machine
p kpara akpa ịcha igwe akpaka nri, nri, akpaka agụta. Light N'ịchọpụta usoro mata ntụpọ ngwaahịa, silk akpaka nkwụsị na ndị ọzọ na ọrụ na otu nke akpaka kọmputa akara akpa ọnwụ igwe.
1-1, South osisi, Zhangji Industrial Park, Tongshan District, Xuzhou City